Vakadzi uye vanyoro. Kugamuchirwa kumusangano mukuru wechikwata che 2018. Izwi rinotanga ikozvino! (yakagadzirwa) - NYE kuverengwa kweJs, Vjs, Nightclubs 2019
Vakadzi uye vanyoro. Gadzirira chiitiko chisina kufanana nezvimwe zvawakamboona. Iwe uri kuda kuona chikamu chakanaka che2017 uye 2018 (yakagadzirwa)